रूकुम घटना : पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि डाक्टरलाई आपत – The Public Today
विजय कुमार सिंह असार ५, २०७७ ८:२६ am
काठमाडाैं, असार ५ गते । जिल्ला अस्पताल जाजरकोटका मेडिकल अधिकृत डाक्टर भूपेन्द्रप्रकाश मल्ल, अमिन शाह र औसरसिंह राठौरको घर खलंगामै पर्छ । तर, तीनै जना डाक्टर चार दिनदेखि घर जान सकिरहेका छैनन्। उनीहरू जिल्लाबाहिरका डाक्टरसँगै अस्पतालभित्रै बसिरहेका छन् ।
विगतमा घरबाटै काममा आउजाउ गर्ने उनीहरू यति खेर रूकुम घटनाको पोस्टमार्टम रिपोर्टका कारण सुरक्षा घेरामा बस्नुपरेको हो । रूकुम पश्चिमको सोतीमा जेठ १० गते ज्यान गुमाएका ६ जनाको पोस्टमार्टम रिपोर्टमा डाक्टरले जालझेल गरेको पीडित पक्षको आरोप छ ।
पोस्टमार्टम रिपोर्टप्रति आशंका गर्दै पीडित पक्ष विरोधमा उत्रिएपछि डाक्टरहरू अस्पतालभित्रै सुरक्षा घेरामा। डाक्टरले पोस्टमार्टम रिपोर्टमा मृत्युको कारण पानीमा डुबेर मरेको उल्लेख गरेपछि स्थानीय आक्रोशित बनेका हुन्। ‘फोक्सोमा बालुवा छ, पेटमा पानी छैन भनिएको छ। तर, मृत्युको कारणमा पानीमा डुबेर मरेको उल्लेख छ। यो कसरी हुनसक्छ’, संघर्ष समितिका सह संयोजक छवि पन्तले भने, ‘पानीमा डुबेर मरेको शवमा पानी किन छैन ? ’
अस्पतालका डा. पुनले पीडित पक्षले लगाएको आरोप गलत भएको दाबी गरे। ‘हाम्रो रिपोर्टमा कज अफ डेथमा ड्रोइङ भन्ने छ। ड्रोइङ भन्नेबित्तिकै डुबेको भन्ने मात्रै अर्थ लाग्दैन। डुबाइएको भन्ने पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले जे देख्यौं, त्यही लेख्यौं। हामीलाई न कसैको दबाब न त कसैको प्रभाव छ।’ अर्का डा. अमिन शाहले अनायासै विवाद गर्दा आफूहरू असुक्षित भएको बताए। आन्दोलनको नेतृत्व स्थानीय संघर्ष समितिले गरेको छ। प्रशासनले आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि समितिले झन् कडा बनाउँदै पोस्टमार्टम रिपोर्ट तयार गर्ने पाँच जना डाक्टरविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी थालेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।